Mahereza fa Momba Anao i Jehovah! | Fianarana
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Grika Groenlandey Guarani Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kazakh Kinyarwanda Kirghiz Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Kwangali Kwanyama Letonianina Lingala Litoanianina Luo Malagasy Malezianina Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Ndebele Ndonga Ngabere Norvezianina Nzema Népali Oromo Ouzbek Pangasinan Poloney Portogey Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tigrigna Tiorka Tseky Tsonga Twi Venda Vietnamianina Wolaita Xhosa Yorobà Zandé Zoloa Éwé
“Mahereza sy matanjaha. ... Momba anao i Jehovah Andriamanitrao.”—JOS. 1:9.
Inona no tsy maintsy nataon’i Josoa mba hananany finoana sy herim-po foana?
Iza no olona be herim-po mampiaiky anao indrindra?
Ny ohatr’iza no afaka manampy anao hanana finoana sy herim-po ilaina amin’ny fitoriana?
1, 2. a) Inona no ilaintsika mba hahafahantsika miatrika fitsapana? b) Inona no atao hoe finoana? Hazavao.
TENA faly isika manompo an’i Jehovah. Na izany aza, dia miatrika olana toy ny olona rehetra isika, ary mety ‘hijaly noho ny fahamarinana’ koa. (1 Pet. 3:14; 5:8, 9; 1 Kor. 10:13) Mila manana finoana sy ho be herim-po àry isika, mba hahafahantsika hiatrika an’ireny fitsapana ireny.
2 Inona no atao hoe finoana? Hoy ny apostoly Paoly: “Ny finoana dia fiandrasana amin-toky ny zavatra antenaina, ary fanomezana porofo mazava momba ny zavatra tena misy izay tsy hita maso.” (Heb. 11:1) Toy izao no andikana azy io ao amin’ny Baiboly Amin’ny Teny Anglisy Tsotra: “Toy ny taratasy fanamarinam-pananana ny finoana, ka manome antoka fa ho azo ny zavatra antenaina. Ny hoe manam-pinoana dia midika hoe mahazo antoka ny amin’ny zavatra tsy hita.” Ny taratasy fanamarinam-pananana dia manome toky fa antsika tokoa ilay fananana voaresaka ao amin’ilay izy. Koa satria mino sy matoky isika fa manatanteraka ny teniny foana Andriamanitra, dia toy ny hoe manana taratasy fanamarinam-pananana sarobidy isika. Matoky tanteraka isika hoe tena hitranga ireo zavatra nampanantenain’i Jehovah, ary ho tanteraka izay rehetra nolazainy ao amin’ny Teniny, na dia mbola tsy hitantsika aza.
3, 4. a) Inona no atao hoe be herim-po? b) Inona no azontsika atao mba hananantsika finoana sy herim-po bebe kokoa?
3 Ary inona indray no atao hoe be herim-po? Ny olona be herim-po dia tsy matahotra ny hiteny na hanao zavatra, na dia eo aza ny sakantsakana sy ny loza. Hatoky tena sy ho sahy hanao zavatra isika raha be herim-po, ary ho vonona hijaly mihitsy noho ny zavatra inoantsika.—Mar. 6:49, 50; 2 Tim. 1:7.
4 Tena ilaina ny finoana sy ny herim-po. Ahoana anefa raha mahatsapa ianao hoe mbola mila bebe kokoa an’ireo toetra ireo? Maro be ny olona nanana azy ireo ao amin’ny Baiboly, ka hanampy anao ny fandinihana ny ohatr’izy ireo.
NANAMPY AN’I JOSOA I JEHOVAH
5. Inona no nilain’i Josoa mba hamitana tsara ny andraikiny?
5 Hodinihintsika izay nitranga 3 500 taona lasa tany ho any. Efapolo taona no lasa tamin’izay, hatramin’ny nanafahan’i Jehovah an’ireo Israelita an-tapitrisany, avy tamin’ny fanandevozana tany Ejipta. I Mosesy mpaminany no nitarika azy ireo. Maty teo an-tampon’ny Tendrombohitra Nebo anefa i Mosesy, izay 120 taona tamin’izay, ary avy nitazana ny Tany Nampanantenaina. Nandimby azy àry i Josoa, izay lehilahy “feno fanahim-pahendrena.” (Deot. 34:1-9) Efa vonona haka ny tany Kanana ny Israelita tamin’izay, ka nila fahendrena avy tamin’Andriamanitra i Josoa raha te hahay hitarika an’io vahoaka io. Nila finoana sy herim-po koa izy.—Deot. 31:22, 23.
6. a) Inona no ilantsika herim-po, araka ny Josoa 23:6? b) Inona no ianarantsika avy amin’ny Asan’ny Apostoly 4:18-20 sy ny Asan’ny Apostoly 5:29?
6 Niady elaela ny Israelita vao nahazo ny tany Kanana. Azo inoana fa nampahery azy ireo ny nahita hoe nanana fahendrena sy herim-po ary finoana i Josoa. Tsy ny herim-po hoenti-miady ihany anefa no nilain’ny Israelita. Nila herim-po koa izy ireo mba hankatoavana an’i Jehovah. Namela izao hafatra izao i Josoa, taloha kelin’ny nahafatesany: “Aoka ianareo ho be herim-po ka hitandrina sy hanao izay rehetra voasoratra ao amin’ny boky misy ny lalàn’i Mosesy. Aza miala amin’izany mihitsy, na mivily miankavanana na miankavia.” (Jos. 23:6) Mila herim-po koa isika mba hankatoavana an’i Jehovah foana, indrindra fa rehefa misy olona manery antsika hanao zavatra mifanohitra amin’ny sitrapon’Andriamanitra. (Vakio ny Asan’ny Apostoly 4:18-20; 5:29.) Hanampy antsika ho be herim-po i Jehovah, raha mivavaka aminy isika mba hahazo tari-dalana, sady matoky azy.
INONA NO AZONTSIKA ATAO MBA ‘HAHOMBY IZAY HATAONTSIKA’?
7. Inona no tsy maintsy nataon’i Josoa, mba hananany herim-po sy hahitany fahombiazana?
7 Tsy maintsy mianatra sy mampihatra izay voalazan’ny Baiboly isika, raha te hanana herim-po hanaovana ny sitrapon’Andriamanitra. Izany no nasaina nataon’i Josoa, rehefa voatendry handimby an’i Mosesy izy. Hoy i Jehovah taminy: ‘Mahereza sy matanjaha ianao, ary mitandrema tsara mba hanao araka ny lalàna rehetra nandidian’i Mosesy mpanompoko anao. Aoka tsy ho afaka am-bavanao ity boky misy ny lalàna ity. Ary vakio sy saintsaino andro aman’alina izany. Amin’izay ianao dia hitandrina tsara izay rehetra voasoratra ato, ka hahomby izay hataonao ary hanao zavatra amim-pahendrena ianao.’ (Jos. 1:7, 8) Nanaraka izany torohevitra izany i Josoa, ka ‘nahomby izay nataony.’ Raha manao izany koa isika, dia hanana herim-po bebe kokoa ary hahomby eo amin’ny fanompoana an’i Jehovah.
Andinin-teny ho an’ny taona 2013: “Mahereza sy matanjaha. ... Momba anao i Jehovah Andriamanitrao.”—Josoa 1:9.
8. Inona ny andinin-teny ho an’ny taona 2013, ary nahoana no hanampy anao izy io?
8 Azo inoana fa tena nampahery an’i Josoa ny tenin’i Jehovah hoe: “Mahereza sy matanjaha. Aza mivadi-po na mihorohoro, fa momba anao i Jehovah Andriamanitrao na aiza na aiza alehanao.” (Jos. 1:9) Momba antsika koa i Jehovah. Tsy tokony ‘hivadi-po na hihorohoro’ àry isika, na inona na inona fitsapana mahazo antsika. Mariho ilay hoe: “Mahereza sy matanjaha. ... Momba anao i Jehovah Andriamanitrao.” Ireo teny ao amin’ny Josoa 1:9 ireo no nofidina ho andinin-teny ho an’ny taona 2013. Tena hampahery antsika mandritra ireo volana ho avy, ireo teny ireo, sy ny ohatra hafan’ireo olona nanam-pinoana sy be herim-po.
NIANDANY TAMIN’I JEHOVAH IZY IREO
9. Inona no mampiseho fa nanam-pinoana sy be herim-po i Rahaba?
9 Nafenin’i Rahaba mpivaro-tena ireo mpitsikilo roa lahy nalefan’i Josoa tany Kanana, ary lalan-kafa no natorony an’ireo olona tonga mba hisambotra azy roa lahy. Noho izany finoana sy herim-po nasehony izany, dia avotra izy sy ny fianakaviany rehefa nandrava an’i Jeriko ny Israelita. (Heb. 11:30, 31; Jak. 2:25) Mazava ho azy koa fa niala tamin’ny fomba fiaina ratsiny i Rahaba, mba hampifaliana an’i Jehovah. Toy izany koa ireo olona sasany lasa Kristianina. Nanana finoana sy be herim-po izy ireo, ka nanova ny fiainany mba hampifaliana an’i Jehovah.
10. Nanao ahoana ny toe-javatra nisy an’i Rota tamin’izy nilaza fa niandany tamin’ny fivavahana marina? Inona no fitahiana azony vokatr’izany?
10 Be herim-po koa i Rota, ary niandany tamin’ny fivavahana marina. Vehivavy moabita efa maty vady izy, ary niaina taorian’ny nahafatesan’i Josoa. Israelita ny vadiny, ka azo inoana fa nahalala zavatra momba an’i Jehovah izy. Efa maty vady koa i Naomy rafozany, ary nanapa-kevitra hiala tany Moaba, ka hody tany Betlehema. Niaraka taminy i Rota, kanefa rehefa teny an-dalana izy ireo, dia nampirisika azy hiverina i Naomy. Hoy anefa i Rota: “Aza manery ahy handao anao sy hisaraka aminao ... Ny firenenao no ho fireneko, ary ny Andriamanitrao no ho Andriamanitro.” (Rota 1:16) Ary dia izany tokoa no nataon’i Rota. Nanambady an’i Boaza, havan’i Naomy, i Rota tatỳ aoriana. Niteraka zazalahy izy, ary lasa razamben’i Davida sy Jesosy. Notahin’i Jehovah izy satria nanam-pinoana sy be herim-po.—Rota 2:12; 4:17-22; Mat. 1:1-6.
NANAO VIVERY NY AINY IZY IREO!
11. Inona no nataon’i Joiada sy Joseba ka ahitana fa be herim-po izy ireo? Inona no vokatry ny herim-pon’izy ireo?
11 Mihamatanjaka ny finoantsika ary lasa be herim-po kokoa isika, rehefa hitantsika hoe ampian’i Jehovah ireo olona manao loha laharana ny sitrapony sy mitady izay hahasoa ny mpiray finoana aminy. Diniho ny zava-nitranga taorian’ny nahafatesan’i Ahazia Mpanjaka. I Atalia no renin’i Ahazia, kanefa novonoin’izy io daholo ny zanak’i Ahazia, ary nanao ny tenany ho mpanjaka izy. Nanao vivery ny ainy àry i Joiada Mpisoronabe sy Joseba vadiny, ka nanafina an’i Joasy zanak’i Ahazia, nandritra ny enin-taona. Navoakan’i Joiada ilay zaza tamin’ny taona fahafito, ka notendreny ho mpanjaka, ary i Atalia kosa nasainy novonoina. (2 Mpanj. 11:1-16) Nanampy an’i Joasy Mpanjaka koa i Joiada tatỳ aoriana, rehefa namboarina ny tempoly. Maty i Joiada rehefa 130 taona, ary niara-nalevina tamin’ny mpanjaka, “satria nanao soa teo amin’ny Israely sy tamin’Andriamanitra ary tamin’ny tranon’Andriamanitra.” (2 Tan. 24:15, 16) Noho ny herim-pon’i Joiada sy ny vadiny, dia voaro ny tarana-mpanjaka niavian’ny Mesia.
12. Inona no nataon’i Ebeda-meleka, ka mampiseho fa be herim-po izy?
12 Nanao vivery ny ainy hanavotana an’i Jeremia koa i Ebeda-meleka, tandapan’i Zedekia Mpanjaka. Nendrikendrehin’ny andrianan’ny Joda i Jeremia hoe mampirisika ny olona hikomy, ka navelan’ny mpanjaka hosamborin’ireo andriana ireo i Jeremia. Nalefan’izy ireo tao anaty lavaka fanangonan-drano feno fotaka anefa i Jeremia mba ho faty tao. (Jer. 38:4-6) Maro no nankahala an’i Jeremia, ka nampidi-doza ny nanampy azy. Sahy niangavy tamin’ny mpanjaka anefa i Ebeda-meleka mba hamonjena an’i Jeremia. Nanaiky ny mpanjaka, ary nasainy naka lehilahy 30 i Ebeda-meleka mba hiaraka aminy. Vokatr’izany, dia nampanantena an’i Ebeda-meleka i Jehovah, tamin’ny alalan’i Jeremia, hoe tsy ho faty izy rehefa hanafika an’i Jerosalema ny Babylonianina. (Jer. 39:15-18) Mamaly soa an’ireo olona be herim-po manao ny sitrapony tokoa i Jehovah!
13. Ahoana no ahitana fa be herim-po ireo Hebreo telo lahy, ary inona no ianarantsika avy amin’ny tantaran’izy ireo?
13 Nisy Hebreo telo lahy koa tamin’ny taonjato fahafito T.K., nahazo valisoa tamin’i Jehovah satria nanam-pinoana sy be herim-po. Namory an’ireo olona ambony tao Babylona i Nebokadnezara Mpanjaka tamin’izay, ary nandidy azy ireo mba hivavaka amin’ny sarivongana volamena iray goavam-be. Hatsipy ao anaty lafaoro misy afo mivaivay izay tsy mankatò. Niteny tamim-panajana tamin’ny mpanjaka anefa izy telo lahy hoe: “Mahavonjy anay ilay Andriamanitra tompoinay. Hamonjy anay avy ao amin’ny lafaoro misy afo mivaivay sy eo an-tananao izy, ry mpanjaka ô! Ary na tsy hamonjy anay aza izy, dia aoka ho fantatrao, ry mpanjaka ô, fa tsy hanompo an’ireo andriamanitrao izahay, ary tsy hivavaka amin’ilay sarivongana volamena natsanganao.” (Dan. 3:16-18) Novonjen’i Jehovah tokoa izy telo lahy, araka ny voatantara ao amin’ny Daniela 3:19-30. Marina fa tsy hisy olona handrahona antsika hoe hatsipiny ao anaty lafaoro misy afo mivaivay isika. Mety hiatrika zavatra tena sarotra anefa isika indraindray, ka tsy ho mora ny hankatò an’i Jehovah amin’izay. Afaka matoky anefa isika fa hotahin’i Jehovah isika, raha manana finoana sy be herim-po.
14. Inona no mampiseho fa be herim-po i Daniela, ary inona no vokatr’izany?
14 Nanam-pinoana sy be herim-po koa i Daniela. Nandresy lahatra an’i Dariosy Mpanjaka ny fahavalon’i Daniela, mba hamoaka didy hoe: ‘Izay manao fangatahana ato anatin’ny telopolo andro, na amin’andriamanitra izany na amin’olona, afa-tsy amin’ny mpanjaka ihany, dia hatsipy ao an-davaky ny liona.’ Raha vao ren’i Daniela hoe vita sonia ilay didy, dia nankao an-tranony izy. Nisokatra nanandrify an’i Jerosalema ny varavarankelin’ny tranony ambony. ‘Nandohalika sy nivavaka izy, ary nidera an’Andriamaniny intelo isan’andro, araka ny efa fanaony talohan’izay.’ (Dan. 6:6-10) Natsipy tao an-davaky ny liona i Daniela noho izany, kanefa nanafaka azy i Jehovah.—Dan. 6:16-23.
15. a) Ahoana no nampisehoan’i Akoila sy Prisila fa nanam-pinoana sy be herim-po izy ireo? b) Inona no dikan’ny tenin’i Jesosy ao amin’ny Jaona 13:34, ary ahoana no nampisehoan’ny Kristianina maro an’izany fitiavana izany?
15 Miresaka momba ny mpivady iray atao hoe Akoila sy Prisila koa ny Baiboly. “Nanao vivery ny ainy” izy ireo hamonjena an’i Paoly. (Rom. 16:3, 4; Asa. 18:2) Be herim-po izy ireo, ary nankatò an’ilay tenin’i Jesosy hoe: “Omeko didy vaovao ianareo, dia ny mba hifankatiavanareo. Toy ny nitiavako anareo no tokony mba hifankatiavanareo koa.” (Jaona 13:34) Efa voalaza ao amin’ny Lalàn’i Mosesy hoe: “Tiavo ny namanao tahaka ny tenanao.” (Lev. 19:18) Nahoana anefa i Jesosy no nilaza fa “vaovao” ilay didy nomeny? Satria tokony ho vonona hamoy ny aintsika ho an’ny hafa isika, toy ny nataony, raha manam-pitiavana. Maro ny Kristianina naneho fitiavana toy izany. Nisikina herim-po sy “nanao vivery ny ainy” izy ireo, mba hahatonga ny mpiray finoana aminy tsy hampijalin’ny fahavalo na hovonoin’izy ireo.—Vakio ny 1 Jaona 3:16.
Tsy nanaiky lembenana mihitsy ny Kristianina voalohany
16, 17. Inona no fitsapam-pinoana natrehin’ny Kristianina voalohany, ary inona no fitsapana mitovitovy amin’izany natrehin’ny Kristianina ankehitriny?
16 Be herim-po ny Kristianina voalohany, ka i Jehovah irery ihany no notompoin’izy ireo, toy ny nataon’i Jesosy. (Mat. 4:8-10) Tsy nety nandoro emboka manitra mba ho fanomezam-boninahitra ny mpanjaka romanina izy ireo. (Jereo ny sary.) Hoy i Daniel Mannix tao amin’ilay bokiny hoe Ireo Efa ho Faty (anglisy): ‘Nasiana alitara nisy afo tao amin’ny kianja nitondrana azy ireo. Raha nanipy emboka manitra iray tsongo tao anatin’ilay afo fotsiny ilay Kristianina voafonja, dia nomena Taratasy Fanamarinana ho Nanao Sorona, ka nafahana. Nohazavaina tsara taminy koa fa tsy nivavaka tamin’ny mpanjaka akory izy raha nanao izany, fa nanaiky fotsiny hoe andriamanitra ilay mpanjaka romanina. Zara raha nisy Kristianina nety nanao izany anefa.’
17 Toy izany koa ny natao tamin’ireo Kristianina ankehitriny, tany amin’ny toby fitanan’ny Nazia. Raha tsy te hovonoina ho faty izy ireo, dia nila nanao sonia taratasy iray milaza hoe tsy hanompo an’i Jehovah intsony. Imbetsaka izy ireo no nampirisihina hanao izany, nefa vitsy ihany no nanaiky. Nanao vivery ny ainy koa ny Vavolombelona tany Rwanda nandritra ny fandripahana foko tany. Niaro an’ireo Vavolombelona tutsi ireo Vavolombelona hutu, ary niaro an’ireo Hutu koa ny Tutsi. Mitaky finoana sy herim-po tokoa ny fiatrehana fitsapana toy izany.
TSAROVY FA MOMBA ANTSIKA I JEHOVAH!
18, 19. Inona avy ny ohatra ao amin’ny Baiboly manampy antsika hanana finoana sy herim-po ilaina amin’ny fitoriana?
18 Manana tombontsoa be isika ankehitriny, mandray anjara amin’ny fitoriana momba ilay Fanjakana sy manao mpianatra. Io no asa lehibe indrindra nankinin’Andriamanitra amin’ny olombelona. (Mat. 24:14; 28:19, 20) Tena faly isika hoe nanome modely tonga lafatra ho antsika i Jesosy! ‘Nitety tanàna sy vohitra izy, ka nitory sy nanambara ny vaovao tsaran’ny fanjakan’Andriamanitra.’ (Lioka 8:1) Mila manana finoana sy herim-po toa azy isika, mba hahafahantsika mitory ny hafatra momba ilay Fanjakana. Manampy antsika koa i Jehovah, ka afaka ny ho be herim-po toa an’i Noa isika. “Mpitory ny fahamarinana” i Noa, “teo amin’ny tontolon’ny olona tsy natahotra an’Andriamanitra”, izay efa nadiva ho ringan’ny safodrano tamin’izay.—2 Pet. 2:4, 5.
19 Manampy antsika hanao ny asa fitoriana ny vavaka. Nivavaka ny Kristianina sasany rehefa nenjehina, mba hahafahan’izy ireo ‘hitory ny tenin’Andriamanitra amim-pahasahiana.’ Novalian’i Jehovah ny vavak’izy ireo. (Vakio ny Asan’ny Apostoly 4:29-31.) Raha tsy sahy mitory isan-trano àry ianao, dia mivavaha mba hanana finoana sy herim-po bebe kokoa. Hovalian’i Jehovah ny vavaka ataonao.—Vakio ny Salamo 66:19, 20. *
20. Inona no fanampiana ananantsika mba hahafahantsika manao ny sitrapon’i Jehovah?
20 Tsy mora foana ny manao ny sitrapon’Andriamanitra, rehefa miatrika fitsapana isika, eto amin’ity tontolo ratsy ity. Tsy miady irery anefa isika fa momba antsika Andriamanitra. Manampy antsika koa ny Zanany, ilay Lohan’ny fiangonana. Eo koa ireo Vavolombelona fito tapitrisa mahery namantsika maneran-tany. Miaraha amin’izy ireo, ary aoka ianao hanam-pinoana foana, hazoto hitory ny vaovao tsara, ary hitadidy ny andinin-teny ho an’ny taona 2013 hoe: “Mahereza sy matanjaha. ... Momba anao i Jehovah Andriamanitrao.”—Jos. 1:9.
^ feh. 19 Misy ohatra hafa koa ao amin’ilay lahatsoratra hoe “Mahereza sy Matanjaha!”, ao amin’ny Tilikambo Fiambenana 15 Febroary 2012.